အကောင်းဆုံး Laminated Kraft စက္ကူ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Laminated Kraft စက္ကူ စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
PP / PE ယက်ထည် Laminated Kraft စက္ကူ ထုပ်ပိုး application များပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းတဲ့ပြီးသွားသည်။ ၎င်းတို့သည်မကြာခဏ laminated kraft စက္ကူအိတ်များလုပ်ဖို့သို့မဟုတ်အထည်အလိပ်များအတွက်ထုပ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
Summer Show Plastic Corporation ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင် PP / PE အမျိုးမျိုးသောအထည်ထုတ်ကုန်များအကြားစုပ်ယူထားသောစက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်း Taiwan။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ပို့မှုကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ အရောင်ချွတ်ထားသောသို့မဟုတ်အညစ်မကင်းသော kraft paper ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းတွင်အရှည်နှင့်အကျယ်၊ အလေးချိန်နှင့်သိပ်သည်းဆ၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ မတော်တဆတိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တည်ငြိမ်စေသောကုသမှုများပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်အားလုံးစုံစမ်းရေးကြိုဆိုပါတယ်။ သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းရှိသင့်ပါသလား
သိုမဟုတ်ထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်လိုအပ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ ထွက်ရောက်ရှိ ဒီနေ့ငါတို့
ပုံစံ - LP-SERIES-01
Polypropylene(PE)/Polypropylene(PP)Kraft စက္ကူ Composite ပစ္စည်း
ပစ္စည်း:PE/PP kraft စက္ကူ laminated
PP ထုတ်လုပ်ခြင်း,PE,PS,ABS ကုန်ကြမ်းအိတ်များသည်အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်သောအမှုန့်များသို့မဟုတ် granular ထုတ်ကုန်များထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်တော်သည်.အီး.ဆ.ဘိလပ်မြေ,,ရေနံဓာတုပစ္စည်း,ငါးမန်း,စသည်တို့.
ကျနော်တို့ PE laminated ဒြပ်ပေါင်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ထောက်ပံ့/PP သည်စက်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်ထည်အိတ်များကိုရက်လုပ်သည်.ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်မှစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်,ယနေ့ကိုးကားဘို့ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/laminated-kraft-paper.html
အကောင်းဆုံး Laminated Kraft စက္ကူ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။